Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị na-anya ụgbọ elu Cebu Pacific enwetala ọgwụ mgbochi 100% nke ọma
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị ọrụ ụgbọ elu Cebu Pacific agbaala ọgwụ mgbochi 100%.
CEB na-eme mmemme dị ịrịba ama nke a dị ka emebere ya, yana oge maka mmụba a na-atụ anya na ndị njem n'ọnwa ndị na-abịa, na-esochi mbelata nke mmachi njem n'ofe Philippines.
Mmemme Nchedo COVID bụ akụkụ nke atụmatụ otu Gokongwei maka ngalaba azụmaahịa ya niile.
Ndị ọrụ niile nke Cebu Pacific bụ pasentị 98 gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke.
Cebu Pacific enwetala ọkwa nchekwa kpakpando 7 site na airlineratings.com maka nnabata COVID-19.
Ụgbọ elu kasị ukwuu nke Philippines, Pasent Cebu, enwetala ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 100% maka ndị ọrụ ya na-efe efe na-arụsi ọrụ ike site na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ndị ọrụ ya, COVID Protect, yana mmekọrịta dị iche iche ya na ndị LGU na mba ahụ.
"Obi dị anyị ụtọ ịkọrọ onye ọ bụla akụkọ a ka anyị na-akwado ịkwalite netwọk ụlọ anyị iji gboo mkpa njem njem. Pasent Cebu na-aga n'ihu na-akwalite ụkpụrụ nchekwa ya ma anyị maara na ịnwe ndị ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke ga-ewusi ntụkwasị obi na ntụkwasị obi nke ọha na eze na njem ụgbọ elu, "Félix Lopez, osote onye isi oche maka Ngalaba Ndị mmadụ kwuru na Pasent Cebu.
Mmemme nchekwa COVID bụ akụkụ nke Gokongwei Group's initiative for ya niile azụmahịa nkeji. Site na nke a, ndị ọrụ CEB nwetara inoculation n'efu maka onwe ha na ndị dabere ha, yana ndị ọrụ nke atọ, dịka ndị ọrụ nbanye na ndị na-ahụ maka akpa.
Ewezuga mmemme ndị otu a na-eduzi, CEB rụkwara ọrụ aka na ngalaba gọọmentị dị iche iche n'ọnwa gara aga iji hụ na a ga-enye ndị ọrụ ya ọgwụ mgbochi ọ bụla dị, n'oge mbụ enwere ike.
"Anyị na-aja ndị na-anya ụgbọ elu anyị na ndị ọrụ ụgbọ mmiri anyị mma maka iji aka ha gbaa ọgwụ mgbochi, ọ bụghị naanị iji chebe onwe ha na ezinụlọ ha, kamakwa ndị njem ha na-ebu. Anyị na-egosipụtakwa ekele anyị nye ndị isi anyị na Gokongwei Group maka iduzi mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana n'ezie, ndị mmekọ gọọmentị anyị maka ịnakwere ngalaba njem dị ka ihe kacha mkpa,” Capt. Sam Avila, osote onye isi oche maka ọrụ ụgbọ elu na Cebu Pacific kwuru.
Ndị ọrụ Cebu Pacific bụ 98% gbara ọgwụ mgbochi zuru oke. Dịka onye mmekọ ụgbọ elu mbụ nke Ingat-Angat, yana dịka onye na-akwado nkwado obodo, CEB na-ebuga ọgwụ mgbochi site na mba ọzọ gaa Philippines, na n'ofe obodo ahụ kemgbe March nke afọ a. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ebugola ọgwụ mgbochi nde 16.5 site na China gaa Philippines, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ọgwụ mgbochi 25 gafee ebe obibi 28.
CEB enwetala ogo nchekwa kpakpando 7 site na airlineratings.com maka nnabata COVID-19. Ọ na-aga n'ihu na-emejuputa usoro dị iche iche maka nchekwa ka ọ na-agba mbọ iweghachi ntụkwasị obi ọha na eze na njem ụgbọ elu.
CEB na-arụ ọrụ netwọk ụlọ kachasị na Philippines na-ekpuchi ebe 32, n'elu ebe asatọ (8) mba ụwa. Ụgbọ mmiri ya dị ike 73, otu n'ime ndị kasị nta n'ụwa, gụnyere abụọ (2) ndị na-ebu ATR raara onwe ha nye na otu (1) A330 freighter.